unsnap: chishandiso chitsva chekubva kubva snap kuenda kuFlatpak | Linux Addicts
Isaac | 07/04/2022 07:40 | Sisitimu Yekutonga
unsnap chishandiso chemahara uye chakavhurwa sosi, pasi peMIT rezinesi, uye yakanyorwa naAlan Pope. Ichi chirongwa chekuraira chinokutendera kuti uchinje snap mapakeji kuFlatpak. Chimwe chinhu chinouya kana vashandisi vazhinji vachinyunyuta nezve rudzi urwu rweCanonical package uye vari kuwedzera kutarisa kune mamwe mafomu epakeji.
Chakanyanya kunaka ndechekuti haina kuoma zvachose, mumatanho maviri akareruka maitiro e Shanduko ye snap mapakeji kuFlatpak yechero software yaunoda. Zvinobva pane mamwe magwaro anogadzirisa basa iri, uye iro rinogona kugadziridzwa nevashandisi kana zvichidikanwa kuti vagadzirise kune zvavanoda.
Kunobva: GitHub kubva kupurojekiti
Kana iwe uchida kutamisa chero snap package kuenda kuFlatpak pamushini weLinux, unsnap ndiyo yauri kutsvaga. Kunyangwe ichiri mumatanho ekutanga ebudiriro (parizvino inoonekwa sePre-Alpha vhezheni, saka haifanirwe kushandiswa pamichina yekugadzira), yave kutoshanda uye ichakuchengetedza basa rakawanda. Chii chimwe, Alan Pope, mugadziri wayo, inoziva mapakeji aya chaizvo, yakamboshanda kuCanonical, iyo yakauya neiyo snaps.
Kune mamwe maturusi akaita se snap2flat akagadzirirwawo chinangwa chimwe chete. Izvi zviri muchimiro chepamusoro chebudiriro pane unnsnap.
Pfungwa iri kuseri kweichi unsnap chishandiso iri nyore, shandura mapakeji zviri nyore kubva pane imwe fomati kuenda kune imwe, sezvakaita mutorwa, pakati pevamwe. UYE zvose mumatanho maviri. Iwe unongobatanidza repo kune yako system uye mhanyisa murairo unsnap o mota yakasununguka, uye watova nemagwaro aunoda akagadzirira kushanda.
Kuti utarise iyo kodhi kodhi yezvinyorwa zveunsnap, dhawunirodha, kana kuwana mamwe mashoko nezve kushandiswa nemirairo - Saiti yeprojekti paGitHub
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » unsnap: chishandiso chitsva chekubva kubva snap kuenda kuFlatpak
Jay Lopez akadaro
Snap ichave Canonical inotevera Ubuntu Kubata.
Kuitwa kwakashata, kutungamira kwakashata uye optimization yakaipa.
Flatpack ndiyo ramangwana.
Inongodzikiswa kubva pakuvambwa kwayo, chero munhu anogona kuvaka yavo Flatpak repo (saka hazvinei ne "y" kana "z" kushanda).
Zvakare, inoteedzera mutsara weLinux (kana GNU/Linux, idaidze zvaunoda) yemahara, yakasarudzika uye pasina kupokana yakawedzera optimized kupfuura Snap.
Ichange iri Ubuntu's snap, uye yatodhura zviuru zvevashandisi uye kuverenga.
Uye kana vakaramba vachiomerera pakutema nyanga dzeshangu ikoko, vachaona kuti vanokohwa sei zvavakadyara.
Pindura kuna Jei Lopez